Go’aan-qaadashadu Waa Hoggaamin, Siyaasadduna Cuqdad Maaha ee Waa ilbaxnimo. | Gabiley News
Waxan ka qaybgalay anigoo shakhsi ah munaasibad qaran oo laba Madaxweyne Xilalka kula kala wareegayeen, madasha waxa isugu yimid badiba labeentii umaddayda Somaliland, Go’aanka ka qaybgalka munaasibadda aniga ayaa gaadhay, inta badanna go’aannadayda ma laba-labeeyo ee waan ku adkaystaa, taasina waa ta keentay inaan 9 sano ka hor siyaasadda kula midoobay Cabdiraxmaan Cirro.
Waan ku celinayaa qodobkaas go’aannada haddii aan gaadho kama laabto, inaan munaasibaddan ka qaybgalaana go’aankayga ayey ahayd shakhsiga ah. Xisbiga, Guddoomiyaha, masuuliyiinta iyo cidkasta oo kale kuma raaligeliyo aragtidayda.
Waxan aaminsanahay in munaasibadda Madaxtooyada lagu qabtay ay ahayd munaasibad qaran, sidaa si la mid ah waxan aaminsanahay in Md. Muuse Biixi yahay madaxweynaha Somaliland, iyo madaxweynahayga labadaba, sidaas si la mid waxan aaminsanahay in Dr. Cabdiraxmaan Cirro uu yahay Guddomiyaha Xisbigayga iyo saaxiib aanu isku kalsoonnahay oo aanu soo wada marnay maalmo badan adkaa.
Waxan xusayaa in aan qaar ka mid ah masuuliyiinta Xisbigayga u sheegay shalay inaan anigu shakhsi ahaan ka qaybgalayo munaasibadda oo aan go’aankaas qaatay isla markaasna aanu jirin sharci ii diidaya illeen waa munaasibad qaran’e, anigoo ku tegay martiqaad shakhsi muwaadin ah.
Siyaasadda waxan ku jiray muddo 10 sano ah hadda, waxan ka mid ahaa raggii aasaasay Xisbigan WADDANI, waxan siyaasadda u aqaannaa ilbaxnimo, hubaal siyaasaddu cuqdad maaha, waxa tusaalle ah inaad marwalba u baahantahay cid ku taageerta si aad u gaadhi karto madaxweynenimada.
Aflagaaddada Saaxiibbo badan igaga imanaysaa maaha mid wax ka beddelaysa aragtidayda iyo higsigayga mustaqbal midna, sidoo kale waxba kama beddelayso halgankii iyo taariikhdii aan usoo maray in uu halkan soo gaadho xisbigayga WADDANI, kaliyaata waxan ku kala baranayaa dadka ka qaybgalaya dooddan ku saabsan muwaadin ka qaybgalay munaasibad qaran. Iyadda oo Somalidu hore ugu maahmaaday “Af-xumo nabadna way kaa geysaa, colaadna waxba kaagama tarto”.
Gaarriye-na wuxu hore u yidhi
“Magliga gacal loola baxay
Gondaha uma dhaadhacee
Ha gaadhin laftaan ku idhi
Afkaagana godob ka dhawr
Marbaa jirta gumuc lariday
Galaafto ninkii ridee
Nin iinlow daa gujada”
Mohamed H. Dirir